Famerenana ny fandaharam-potoana: fitaovam-pandraharahana mahery vaika
Connotate dia mahavariana mahatalanjona software fampahalalana maro avy amin'ny tranonkala. Izy io dia manome azy ireo tranonkala iray haingana manapotipotika izay afaka manampy ny finday rehetra ilainy avy hatrany. Izy io dia mifamatotra amin'ny fomba manokana haingana amin'ny votoatiny avo lenta sy manan-danja. Ireo mpitantana sy ireo mpikaroka amin'ny tranonkala mampiasa ity programam-panampiana ity dia afaka mahazo ireto tombony manaraka ireto.
Ny fitaovana mahomby mahomby amin'ny Internet
Ny Connotate dia manolotra interface tsotra, izay ahafahan'ny mpampiasa manangona ny angon-drakitra rehetra ilainy nefa tsy mila mandany ora maro. Raha ny marina, ireo manam-pahaizana amin'io sehatra io dia miandraikitra ny zava-drehetra, noho izany dia tsy mila mandany fotoana betsaka manangona ny vaovao rehetra ilainy ny mpikaroka ao amin'ny Internet, ary tsy mila mandany vola be ho an'ny mpandefitra izy ireo ny asa ho azy ireo. Raha tsy mampiasa io sehatra io dia mila manao ny asa manontolo ny mpampiasa. Ny votoaty manaisotra dia mety ho asa sarotra amin'ny fomba nentim-paharazana. Connotate dia mampiasa rafitra fampandrosoana sy data maimaim-poana, mba hanomezana ny mpampiasa azy ny vahaolana tsara indrindra.
Manazava ny votoatiny
Fanangonana tahirin-kevitra avy amin'ny tranonkala samihafa dia tsy mora ny manao. Mampiasa teknolojia matanjaka i Connotate ary mahafantatra tsara ny fomba hamahana ny mety ho votoatin'ny tranonkala. Ny tanjon'izy ireo dia ny manome hery ny mpampiasa azy mba hanomezana fahafaham-po ny filàn'ny filazam-baovao. Mandritra izany fotoana izany, dia manampy ny lanjany amin'ny votoatin'ny orinasa manolotra ireo mpampiasa azy. Ohatra, izy ireo dia manolotra fandalinana goavana, fampisehoana, tsipika tsotra sy kokoa. Mila mandefa toro-hevitra ny mpampiasa amin'ny alalan'ny ohatra nomeny momba ny karazam-pifandraisan'ny tranonkala tiany hikapoka.
Betsaka ny mpandraharaha efa za-draharaha
Mila mamorona mpiasan'ny Connotate ny mpampiasa iray miaraka amin'ny tsindry iray monja. Ankoatra izany, ny rindrambaiko fanangonana data dia afaka mampifandray ny votoaty amin'ny data automatique. Izany dia mahatonga ny asa rehetra ho mora kokoa, satria mamaha ny vondron'olona marobe, mitantana ny votoatin'ny votoatiny ary miditra amin'ny angona maro samihafa. Ireo mpandraharaha manam-pahaizana ao Connotate dia mahatakatra ireo fanamby. Niara-niasa tamin'ireo mpandrindra apps, fanombohana, ary orinasan-tserasera hafa izy ireo mba handresena azy ireo.
Manamora ny Data Hundreds of Web Data
Ny rindrambaikon'ny Connotate dia mamolavola raki-tsarazara ho anao, anisan'izany ny fitrandrahana, ny fanovàna,. Ny fahaiza-manaon'ny fandaharam-potoana matanjaka dia ahafahanao manamboatra solosaina sy antokon'olona toy izany, manome anao ny fanaraha-maso maimaim-poana momba ny fitrandrahana ny aterineto sy ny fandefasana azy. Ny fitaovam-pampianaran-javatra ataonay dia mamela anao hamongotra ny habetsaky ny tranokalam-baovao iray ary ny maha-zava-dehibe ny angon-drakitra dia mitazona ny votoatin'ny votoatiny ao amin'ny rafitra misy anao.
Dia manamora ny fikarohana
Ny teknolojia avo lenta ampiasaina amin'ny Connotate dia manampy ny mpitantana sy ny mpikaroka amin'ny Internet mba hamoronana vokatra sy vokatra avy amin'ny votoaty amin'ny fomba haingana sy mahomby.Miaraka amin'ity sehatra ity, ny mpanjifa dia mahatsapa tombontsoa ho an'ny tombontsoa, ​​ny angona lehibe ary ny fandaniana Source .